Kurumidza pear uye mbudzi chizi quiche | Bezzia
Maria vazquez | 04/01/2022 10:00 | Yakagadziridzwa ku 30/12/2021 19:23 | Easy mapepa
Quiches makeke anonaka ine base ye shortcrust pastry uye kuzadza nezai uye crème fraîche inobikwa muchoto kusvika yaiswa. Chikafu cheFrench cuisine chinobvuma misiyano yakawanda uye icho nhasi tinoita shanduro yakapusa: quiche inokurumidza nepear uye mbudzi chizi.
Kana munhu asingade kuomesera kana kuda kukwanisa kuunza resipi patafura munguva shoma, yakanaka sosi ndeyekubheja paruzhinji rwekutengesa. Iyo yakanaka ndeye kushandisa yekutengesa shortcrust mukanyiwa, asi iwe unogona zvakare kushandisa a puff pastry, zvakanyanya kuwanikwa mune chero supermarket. Kana nguva isingakoshi uye iwe uchida kugadzira mukanyiwa wako, unogona kuwana kuti ungazviita sei mune resipi ye salmon quiche kuti tinogadzirira kuita nguva.
Kana iri yekuzadza, kuigadzirira hakuzokuudze chero chinhu. Maminitsi gumi ekuti puff pastry inofanira kunge isati yabikwa muchoto yakakwana kuti igadzirire. Uye ndizvo zvese zvaunofanirwa kuita kubika mbatatisi mu microwave uye kusanganisa zvimwe zvinongedzo. Totanga here?
1 pfuti pastry
2 mapeya emusangano akaibva, akapepetwa uye akachekwa (1,5cmx1,5cm)
1 mbatatisi, yakapepetwa uye yakachekwa (1,5cmx1,5cm)
80 g yediced mbudzi cheese
1 zai jena rekukwesha
70 g yemvura kirimu
Chishoma chemapine nzungu
Bvisa chifukidzo cheputi woiisa paforoma (inobviswa kana uchida kukwanisa kuishumira mundiro kana ndiro). Rongedza chigadziko uye madziro zvakanaka uye bvisa yakawandisa mukanyiwa. Zvadaro, baya pasi neforogo, isa pepa rematehwe pamusoro uye miriwo yakaoma pamusoro. Bika pa 190ºC muovheni yepreheated kwemaminitsi gumi. Zvadaro bvisa mapepa nemiriwo uye gadzira 10 mamwe maminitsi. Kana wapedza, bvisa uye urege kushatirwa paunenge uchigadzirira kuzadza.
Kuti ugadzirire kuzadza, isa mbatatisi cubes pandiro, uvafukidze nemapuranga epurasitiki uye vaendese kune microwave. Zvibike nesimba rakazara kwemaminetsi angangoita 4 kusvika dzanyorova.
Kune rimwe divi, mundiro, sanganisa mazai nekirimu yemvura uye piniki yemunyu uye pepper.
Kana uchinge waita zvikamu zvese zvekuzadza zvakagadzirirwa, bhurasha iyo puff pastry base nezai jena kuitira kuti kuzadza kurege kunyorova.
Pashure govera dhayisi rembatatisi, chizi uye peari muforoma.
Kupedza dururira musanganiswa wezai uye kamu cream, wozofambisa mold zvishoma kuitira kuti ipinde zvakanaka pakati pedhayisi, isati yasasa pine nuts pamusoro.
Tora kuchoto uye bika kwemaminitsi makumi matatu nemashanu kana kusvika yaiswa uye yatsvukira pa 190ºC nekudziya kumusoro nekudzika.
Bvisa kunze uye umirire kwemaminitsi gumi kushatirwa kuti udye inokurumidza pear uye mbudzi cheese quiche.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Recipes » Easy mapepa » Quick pear uye mbudzi cheese quiche
Zvishandiso zvekuvandudza kuvharika kweWiFi kumba